कोरोना कहर : समस्यामा परदेशिएका नेपाली, के गर्दैछ एनआरएनए ? - नेपालबहस
कोरोना कहर : समस्यामा परदेशिएका नेपाली, के गर्दैछ एनआरएनए ?
| १७:४०:३२ मा प्रकाशित
२० बैशाख काठमाडौं । संसार नै यतिबेला कोरोना कहरसँग जुधिरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म झण्डै ३४ लाख दुई हजार बढी नागरिकमा कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्लुएचओ’ले जनाएको छ । यस्तै दुई लाख ३९ हजार ६२२ को निधन भएको छ । कूल १० लाख ८३ हजार ९०१ भने निको भएर घर फर्केका छन् ।
कोरोनाको इपिसेन्टरका रूपमा अहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिका नै रहेको छ । अमेरिकामा कूल ११ लाख ३१ हजार ४९२ लाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ । आज मात्रै ४६२ मा नयाँ सङ्क्रमण देखिएको छ । कूल ६५ हजार ७७६ को मृत्यु भएको छ । युरोपेली देश स्पेनमा दुई लाख ४२ हजार ९८८ सङ्क्रमित हुँदा २४ हजार ८२४ को निधन भएको छ । इटालीमा दुई लाख सात हजार ४२८ लाई कोरोना लाग्दा २४ हजार ८२४ को निधन भएको छ । बेलायतमा कूल एक लाख ७७ हजार ४५४ लाई कोरोना लाग्दा २७ हजार ५१० को ज्यान गएको छ । फ्रान्समा कूल एक लाख ६७ हजार ३४६ लाई कोरोना लाग्दा २४ हजार ५९४ को ज्यान गएको छ ।
जर्मनीमा कूल एक लाख ६४ हजार ७७ लाई कोरोना लागेकामा छ हजार ७३६ को ज्यान गएको छ । बेल्जियमममा ४९ हजार ३२ लाई कोरोना लाग्दा सात हजार ७०३ को निधन भएको छ । नेदरल्याण्डमा ३९ हजार ७९१ लाई कोरोना लाग्दा चार हजार ८९३ को ज्यान गएको छ । स्वीटजरल्याण्डमा कूल २९ हजार ७०५ लाई कोरोना लाग्दा एक हजार ७५४ को ज्यान गएको छ । कोरोनाको इपिसेन्टर बनेको युरोपेली देशमा रहेका नेपालीसमेत कोरोनाबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । उनीहरुको रोजगारी खोसिएको छ ।
विद्यार्थी सबैभन्दा बढी मारमा
अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् । बेलायतमा कोरोनाका कारण हालसम्म ३५ जनाको ज्यान गएको छ । विदेशमा कूल दुई हजार २५० नेपाली कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार ५० नेपालीको जयान गएको छ । त्यसमा अमेरिका र बेलायतमा रहेका नेपाली सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
पछिल्लो विवरणअनुसार अमेरिकामा मात्रै एक हजार बढी नेपाली कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै तथ्याङ्क छ बेलायतको पनि । बेलायतमा एक हजार बढी कोरोना सङ्क्रमित हुँदा ३५ नेपालीको ज्यान गएको छ । कोरोना कहरका कारण अमेरिकामा विद्यार्थीको प्रवेशाज्ञा लिएर गएका नेपाली सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् । त्यहाँको सरकारले प्रदान गर्ने राहतसमेत उनीहरुले नपाउने अवस्था रहेको छ । उनीहरु कामसमेत नपाएकाले चर्को आर्थिक मारमा परेका छन् ।
त्यस्तै आधिकारिक कागजात नभएका नेपाली पनि समस्यामा परेका छन् । विभिन्न प्रवेशाज्ञा लिएर विदेश पुगेका नेपालीसमेत समस्यामा परेको पाइएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घको भनाइ छ । कोरोना महामारीले अमेरिकालगायत क्षेत्रमा प्रभावित गैरआवासीय नेपालीको समस्याका बारेमा एनआरएनले छलफल गरेको थियो । सङ्क्रमणले ५० भन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीको निधन भएको र दुई हजार ५०० भन्दा बढी नेपाली कोरोना सङ्क्रमित भएको सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले जानकारी दिए।
कोरोना महामारीको प्रकोप कहिलेसम्म रहने हो अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था नभएकाले अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । अध्यक्ष पन्तले भने, “त्यसका लागि सबै जना मिलेर जान र सबै संयन्त्र परिचालन गनु जरुरी छ ।”
नेपालीको हितमा दूतावास
क्यानाडाका लागि नेपाली राजदूत भृगु ढुङ्गानाले कोभिड–१९ शुरु भएदेखि नै नेपाली राजदूतावासले स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधि शुरु गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार महामारीको अवस्थामा पनि दूतावासले सेवाग्राहीलाई दिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाएको र नेपाली समुदायको हितका लागि २४सैँ घण्टा टेलिफोन तथा इमेल सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकका लागि नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्की महामारीपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीप्रति दूतावास चिन्तित रहेको उल्लेख गर्छन । उनले अमेरिकामा रहेका नेपालको समस्याका बारेमा अमेरिकी सरकारलाई जानकारी दिइएको र विद्यार्थीलगायत नेपाली समुदायमा रहेको मुख्य समस्या पहिचान गरी समाधानको प्रयास गरिएको बताए । सङ्घका महासचिव डा हेमराज शर्माका अनुसार कोरोना भाइरस प्रभावित ४५ देशमा ९०० भन्दा बढी स्वयंसेवक खटाएर ३० हजारभन्दा बढीले राहत पाएका छन् ।
दश हजार युरो राहत सङ्कलन
एनआरएनएका सहकोषाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहालका अनुसार युरोपका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीका लागि भनेर कूल १० हजार युरो बराबरको राहत सङ्कलन गरिएको छ । रासससँगको टेलिफोन कुराकानीमा सहकोषाध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा देखिने समस्या समाधानका लागि समेत आफूहरु प्रयासरत रहेको बताए । कोरोना महामारीले रोजीरोटी खोसिएको छ भने बेरोजगारीको चरम समस्या देखिएको छ । साना व्यवसायीलाई कूल चार हजार युरो बराबरको प्याकेज घोषणा भए पनि ठूला होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालकका लागि भने हालसम्म कुनै राहत प्याकेज घोषणा भएको छैन ।
सहकोषाध्यक्ष दाहालका अनुसार ठूला होटल व्यवसाय गर्नेलाई आगामी दिनमा के–कस्तो अवस्था आउला भनेर तत्काल नै भन्न सकिने अवस्था छैन । उनले भने, “खाडी मुलुक साइप्रसजस्ता देशमा केही राहत उपलब्ध गराउनेतर्फ लागेका छौ । साइप्रसमा तीन हजार डलर र खाडी मुलुकमा पाँच हजार डलर सहयोग उपलब्ध गराउने सोचका साथ काम भएको छ ।” तत्कालका लागि खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी बेलायतमा भूतपूर्व गोरखा सैनिकलाई बढी समस्या परेको छ । वृद्ध उमेरका उनीहरु बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ । यस्तै नेपाली समस्या नपर्दासम्म सम्पर्कमा नआउने, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी नदिने अवस्था पनि रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घले नेपाली रादूतावाससँग मिलेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै सहकोषाध्यक्ष दाहालले भने, “नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध स्थापित गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ । आगामी दिनमा आउने सङ्कटलाई समाधान गर्नेतर्फ पनि हामीले पहलकदमी लिएका छौँ ।”
प्रवेशाज्ञा सकिएकाको हकमा पनि समस्या समाधानका लागि प्रयत्न जारी रहेको छ । व्यक्तिगतरूपमा पनि आपत्विपद्मा परेका नेपालीलाई खुला हृदयका साथ सहयोग गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । तर त्यसले मात्रै पुगेको छैन । विशेषतः घरभाडा र कलेजको शुल्क कसरी तिर्ने भन्नेमा विद्यार्थीलाई बढी समस्या परेको छ । सहकोषाध्यक्ष दाहाल आफैले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलका लागि एक हजार थान मास्क निःशुल्क उपलब्ध गराए । दाहालले नै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ स्पेनलाई पनि एक हजार थान मास्क उपलब्ध गराए ।
दाहालको पहलमा धादिङमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र धार्मिक सम्पदाको पुनःनिर्माणलगायत क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । उनले चीनबाट आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा सात हजार मास्क खरिद गरेर दाहालले युरोपका नेपालीलाई वितरण गरेको । उनले बेल्जियमका लागि पाँच हजार थान मास्क उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पुल : केही सम्पन्न, केही धमाधम बन्दै ४ घण्टा पहिले
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण फैलिएपछि कडाइ, जथाभावी थुक्न नपाइने ४ घण्टा पहिले
वैशाख २७ गतेदेखि कतारी रियालको कारोवार बन्द हुने ५ घण्टा पहिले
भारतपछि नेपालमा रुसी खोपले पायाे प्रयोगको अनुमति ६ घण्टा पहिले
भारतमा संक्रमितकाे संख्या एक करोड ५३ लाख नाघ्यो १३ घण्टा पहिले
चैते दशैंका दिन मन्दिरमा दर्शनार्थीको भीड १५ घण्टा पहिले
किरणले ल्याए मायामा १३ घण्टा पहिले
समीट लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी २० घण्टा पहिले
रामनवमीमा प्रदेश २ को सार्वजनिक बिदा ९ घण्टा पहिले
१५ वर्षीया सालीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने भेनाजु जेल चलान ६ दिन पहिले
बाग्मती प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको बोर्ड गठन ५ दिन पहिले
बुद्ध अन्तर प्रादेशिक उडानको तयारीमा २ दिन पहिले
पहाडी क्षेत्रमा देखिन थाले गोमन सर्प ५ दिन पहिले
कोरोनाको दोस्रो डोज खोप वैशाख ७ देखि लगाइने ४ दिन पहिले
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल विस्तार १ दिन पहिले
योगा गर्दै सर्वसाधारण ७ दिन पहिले
फन भ्यालीमा लाइभ म्युजिकसँगै पौडीमा रमाउन सयौँको भीड १ हप्ता पहिले
गाउँमा पहिलोपटक बिजुली पुगेपछि जनता हर्षित ३ हप्ता पहिले
अज्ञात समूहद्वारा नगरप्रमुखका दुई डोजरमा आगजनी ३ हप्ता पहिले
राष्ट्रपति भण्डारी र समकक्षी हमिदबीच दुईपक्षीय भेटवार्ता ४ हप्ता पहिले
अफगानिस्तानकाे सुरक्षा कारबाहीमा परी २० लडाकू मारिए २ हप्ता पहिले
सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा स्वास्थ्य मापदण्ड बमोजिम गर्ने तयारी १ हप्ता पहिले
एकैदिन ६७ आरोहीले गरे अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण १५ घण्टा पहिले
रसायनिक मलको प्रयोग नगर्ने पक्षमा किसान ! १ महिना पहिले
कांग्रेस बैठक स्थगित १ वर्ष पहिले
नगरपालिकाद्धारा मजदुर तथ्याङ्क सङ्कलन, गर्दै मजदुरलाई खानपिनको व्यवस्था १ वर्ष पहिले
राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणमा तीव्रता, सुरुङमार्गको अध्ययन र निर्माण प्राथमिकता ११ महिना पहिले